အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ချုံးကဒီး ဂျာဂဏာ
By။ ။ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့
ကိုဇာဂနာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်လေး မြန်မာမိန်းခလေးများအား လူမျိုးခြား ဘာသာခြားဝါးမျိုမူ့မှ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေ၇း group ထဲမှာတင်ထားတာတွေ့ရလို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ ပုံရောစာရော မူရင်းအတိုင်း အတိအကျကူးပြီး ပြန်ရှယ်ပါတယ်။
Khin Mg Ye Sein shared Kaung Khant Kyaw's photo.
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာ အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်တယ့် ဇာဂနာရယ့် သဘောထားအမြင်ကတော ဒီလိုပါခင်ဗျာ...
ဒေသခံရခိုင်လူများများ (မွတ်စလင်)များကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေလားလို့ မေးကြည့်ပါတယ်၊ ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်များ၊
ဒါမှမဟုတ် ရခိုင်မွတ်စလင်များလို့ ပဲ ဖြေပါတယ်၊
သူတို့ ကိုသူတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောပါဖူး၊ တိမ်မြှမ်နေတယ့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်၊
သူတို့ ကိုယ် ရိုဟင်ဂျာလို့မပြောရဲဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြင်သစ်၊လန်ဒန်၊ အမေရိကန်ကို သွားတယ့်အခါမှာ ရိုဟင်ဂျာပါလို့ ပြောတယ့်
မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ ပါတယ်၊ သူတို့ ဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားနေသူများဖြစ်ပါတယ်၊
သူတို့ ကို ၁၉၆၀ခုနှစ် ရန်ကုန်မှာ နေစဉ်ကတဲက
သိခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်တုံးကတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ မပြောပဲ အခု လန်ဒန်ရောက်မှ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
မန္တလေးမှာ ဦးဝိယသူ ဆိုတယ့် ဘုန်းကြီးနဲ့ မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲမှာ အတူနေဖူးပါတယ်၊ သူ့ ရဲ့ နာမည်ရင်းက ဦးဝိစတ္တ ဖြစ်ပါတယ်၊ သူဟာအစွန်းရောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ပြီး
ကျောက်ဆည်မှာရှိတယ့် ဗလီတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်၊
စစ်တွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားပြီး ရခိုင်လူမျိုးတွေကို
သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပြီး မီးမွေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဦးဝိယသူ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်တယ့် မန္တလေးသံဃာများရဲ့ 
ထောက်ခံ ဆန္ဒပြမှုတွေမှာ သံဃာအများအပြားပါဝင်တာ
တွေ့ ရတာ တကယ်မဟုတ်ပါဖူး၊ ဖိုတိုရှော့ပ် ကို သုံးပြီး လုပ်ထားတယ့် ဓါတ်ပုံအတု တွေပါ ၊ မန္တလေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာတုံးက ကြိုဆိုကြတယ့် ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ပုံတွေကို သုံးထားတာပါ၊
ဘရှူနိုင်းမှာ ရှိတယ့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဖိတ်လို့ ရှေ့ အပါတ်မှာ ကွာလာလမ်ပူမှာ ရှိတယ့် မွတ်စလင်ညီလာခံတစ်ခုကို သွားတက်ရပါမယ်၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အသေးစီတ် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးချင်ပါတယ်၊
တောင်ကုတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ့် မွတ်စလင်ဆယ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရမှုအတွက်
တရားခံ မပေါ်သေးပါဖူး၊ နေ့ ခင်းကြောင်တောင်
လူမြင်ကွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဖြစ်တယ့်အချိန်မှာ
ရဲအာဏာပိုင်တွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ လာဒ်စားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
(အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်၊ အရေးမပါသော အချက်အလက် အချို့ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 4:02 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook